Otu esi enweta ego na Twitch | e-azụmahịa ozi
Otu esi enweta ego na Twitch
Encarni Arcoya | 15/05/2022 23:00 | Ahịa azụmahịa
Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa, o yikarịrị ka ị ga-achọ ịkpata ego na ya. Ma mgbe ụfọdụ, ọ bụghị nanị na ego nwere ike ịbata site na ụlọ ọrụ gị; Ha nwekwara ike ime ya site na netwọk mmekọrịta. Na ndị ọzọ kpọmkwem, site nkwanye. N'oge a, ị nwere ike iche banyere Youtube, mana eziokwu bụ nke ahụ enwere netwọk mmekọrịta ka ukwuu nke nwere ike inye gị ụgwọ ọrụ ka mma. Ị maara ka esi enweta ego na Twitch?
Ọ bụrụ na anyị ka kparịrị gị ma ịchọrọ ịma ka, na mgbakwunye na azụmahịa gị, nweta ego ọzọ, mgbe ahụ ihe anyị ga-akọwa ga-amasị gị. Na otutu.
1 Twitch, ikpo okwu ọdịnaya ozugbo
2 Ego ole ka emere na Twitch
3 Otu esi enweta ego na Twitch
3.1 "Ndị debanyere aha"
3.3 Mgbasa ozi na Twitch
3.4 Nkwado, ndị mmekọ...
4 Ihe atụ bara uru lekwasịrị anya na eCommerce
Twitch, ikpo okwu ọdịnaya ozugbo
Dị ka ị maara, mgbe anyị na-ekwu maka vidiyo, ọ bụ ihe dị mma iche echiche banyere YouTube. Na ozugbo, ikekwe karịa Facebook ma ọ bụ Instagram. Ma nke bụ́ eziokwu bụ n’ezie Twitch jisiri ike weghara ihe niile dị mma na netwọk mmekọrịta ma jikọta ya na otu.
N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu nke ahụ Twitch bụ ikpo okwu na-enuba nwere vidiyo dị ndụ, mana enwere ike ịdekọ ma dezie ya. Otú ọ dị, ihe kasị mkpa bụ nke mbụ, ebe ọ bụ n'elu ihe niile yiri omenala telivishọn.
Ọrụ nke Twitch metụtara usoro freemium, ya bụ, ya ka ikiri vidiyo ị ga-eri mgbasa ozi site n'oge ruo n'oge ma ọ bụ ị nwere ike ịdenye aha dịka onye debanyere aha na ọwa na ị ga-akwụsị ịhụ mgbasa ozi na mgbakwunye na inwe ọrụ mgbakwunye ndị ọzọ.
Ego ole ka emere na Twitch
N'ezie mgbe anyị jụrụ gị otu esi enweta ego na Twitch Ọ na-abata n'uche nnukwu ego nke ụfọdụ ndị na-asọ asọ emeela ọha na eze, mgbe ụfọdụ na-eji ọnụọgụ anọ, ise ma ọ bụ ọbụna isii. Mana anyị ga-adọ gị aka na ntị. Ọ gaghị ekwe omume ịnweta ya. Ọ bụghị obere obere.
Mbụ ị ga-eme ka onwe gị mara na nke ahụ pụtara ịrara oge, mgbe ụfọdụ na-eche echiche ịtụba na akwa nhicha ahụ, na ọtụtụ ndị ọzọ na-agbalị iṅomi ndị ọzọ. Ma ha niile bụ ahụmahụ na oge, na nke nta nke nta, ọ bụrụ na ị jikwaa jikọọ na ndị na-ege gị ntị, ị nwere ike ịmalite ịkpata ego.
Ya mere, echela na nke a bụ otu abalị, tere aka ya. Ọ na-agbalịsi ike ka ị nweta "ọwa" gị, "akara ngosi" gị ka ịmalite ịkpọ ndị ọzọ ụda.
N'ihi nke a, anyị enweghị ike ịgwa gị ego ole a na-enweta na Twitch n'ihi na ọ dabere n'ọtụtụ ihe ị ga-eburu n'uche. Ọwa nke onye ama ama meghere abụghị otu nke sitere na onye naanị ezinụlọ ya na ezigbo ndị enyi ya mara.
Nke ahụ kwuru, anyị anaghị ekwu na ị nweghị ike ịkpata ego. N'ezie ị nwere ike, ma enwere ọtụtụ ụzọ iji nweta ya. Ị chọrọ ịma ihe ha bụ?
"Ndị debanyere aha"
Ndị debanyere aha pụtara Twitch dị ka ndị ahụ debanyere aha na ọwa ka ịzere ịhụ mgbasa ozi (nke na-adị arọ nke ukwuu mgbe ụfọdụ) wee nweta atụmatụ ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ mmado ahaziri ahazi). Ma na nke a bụ ihe ọtụtụ na-amaghị, ị nwere ike ịgwa onye na-akwado vidiyo ahụ okwu. Ya bụ, i nwere ike ịgwa ya okwu ma ọ bụ dee ya.
N'ihi nke a, ọtụtụ na-akwụ ụgwọ ndenye aha na ọ bụ otu n'ime ego kwụsiri ike ị ga-enweta, ọ bụrụhaala na ị na-ejikọta nke ọma na otu ahụ wee mee ka ha na-emegharị kwa ọnwa.
Twitch na-akwụ gị 50% nke ndenye aha onye debanyere aha ahụ, ma nke ọzọ ọ na-edobe. Ma mgbe enweelarị ihe karịrị ndị na-ekiri 10.000, mgbe ahụ nkesa na-abara gị uru karịa 70/30.
Ego ole ka ndenye aha bara? Anyị na-eche na ọ ga-adabere na ọwa ma n'ozuzu ha bụ 3,5 euro kwa ọnwa. N'ihi ya, ọ bụghị ego ọtụtụ ndị chere na ọ ga-amachibidoro.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta ego na Twitch bụ onyinye, ma ọ bụ ndụmọdụ, ihe ọ bụla ị chọrọ ịkpọ ya. Ọ bụ ụzọ isi kelee ndị na-eme ihe nkiri vidiyo n'ihu ọha maka mbọ ha na-eme na ọwa na vidiyo na ụzọ isi kwụọ ha ụgwọ ọrụ.
Nke kachasị mma bụ na ego a na-enye bụ 100% maka onye ọrụ, Twitch adịghị abanye ebe a iji tinye aka ya n'ihi na ọ ghọtara na ọ bụrụ na e nyere ya bụ n'ihi na ọ kwesịrị ya n'ezie.
N'ihe banyere Spain, nke a anaghị ewe oke, mana ọ nwere ike ịbụ otu ego ọzọ site na Twitch.
Mgbasa ozi na Twitch
Dị ka ọ dị na netwọkụ ndị ọzọ dị ka YouTube, ị nwere ike idowe mgbasa ozi akwụ ụgwọ ka ị nweta uru karịa. Kedu? Na ụdị Twitch efu, ị maralarị na ha nwere mgbasa ozi. Ọzọkwa, ị nwere ike nweta ego mgbasa ozi ahụ, n'agbanyeghị na ị ga-ekekọrịta ya na Twitch.
N'ezie, mgbe ọwa ahụ bara uru, ọ nwere ohere ịmepụta ego ndị ọzọ, ruo n'ókè nke igosi mgbasa ozi ndị debanyere aha. N'ezie, ị ga-akpachara anya ma ghara ime ya nke ukwuu n'ihi na mgbe ahụ ị tinyere n'ihe ize ndụ na ọnwa na-esote ga-ehichapụ ndenye aha.
Nkwado, ndị mmekọ...
Ugbu a, anyị na-aga n'ihu na-edegharị na Facebook na karịsịa na Instagram. Na anyị na-eme ya n'ihi naAzụmaahịa na-achọ ọtụtụ ihe na Twitch maka mmekoritas na ndị nwere ọwa kacha arụ ọrụ yana ọtụtụ ndị debanyere aha iji kpọsaa ngwaahịa ha. Ọ nwere ike ịbụ egwuregwu vidiyo, ọ nwere ike ịbụ mmemme, ọ nwere ike ịbụ ikesa mgbasa ozi n'etiti vidiyo gị dị ndụ…
Ya mere, ụlọ ọrụ na-akwụ gị ụgwọ ma ị na-akpọsa ya. Achọghị ọzọ. N'ụzọ doro anya, ọ gaghị abụ na ị na-emegide ihe wee kwupụta ya, ma ọ bụ na ọ bụ onye nkwado gị. Nke ahụ bụ ihe ọjọọ n'ihi na a ga-akara gị akara ka "erere". Ma ha nwere ike ịdị ụtọ nke ukwuu n'ihe gbasara ọnụọgụgụ.
Ihe atụ bara uru lekwasịrị anya na eCommerce
Ee, anyị maara na ugbu a ị na-eche na nke a bụ maka ndị na-egwu mmiri na ndị na-eme ihe nkiri, mana maka gị nke a agaghị arụ ọrụ ma ọlị. Ma ọ bụ eziokwu? Ọ naghị arụ ọrụ maka eCommerce? Ọfọn, eziokwu bụ na ị na-ezighị ezi.
Ka anyị tinye ihe atụ nke ụlọ ahịa uwe na-enweta ozi kwa izu. Kedu ihe kpatara na ị gaghị eme vidiyo na-egosi ihe ọhụrụ ndị a ma na-ebute ndị niile na-ekiri ihe ụzọ ka ha nwee ike ịtụ uwe kachasị amasị ha? Ha nwekwara ike ịnwale ya na ndụ ma si otú ahụ mee ka ndị mmadụ hụ ka ọ ga-esi dị.
Nke a bụ vidiyo viral n'ihi na ọtụtụ mmadụ ha nwere ike inwe mmasị na iyi ndụ ndị ahụ ma ga-edebanye aha na-ekiri ya na-enweghị mgbasa ozi, kamakwa iso onye na-eme ihe nkiri na-emekọrịta ihe ma gosi ya uwe ọzọ ma ọ bụ dozie obi abụọ.
na vidiyo ahụ ị nwere ike ịnwe nkwado (ụdị akwa), enwere ike inye ndị debanyere aha na onyinye nwekwara ike inye maka ime ha
Ma ọ bụghị naanị nke ahụ. Nhọrọ vidiyo dị ndụ ọzọ nwere ike ịnọ na ụlọ ahịa ahụ. Gosi otú ọ dị, ebe ọ dị, ma kwuo banyere agba oge, uwe ndị a pụrụ ime, ma ọ bụ ọbụna nyere ndị mmadụ aka ịma otú e si ejikọta uwe. Ihe a niile na eCommerce nwere ike ịba uru site na Twitch, ọbụna karịa n'ihi na ejibeghị ya nke ukwuu.
Anyị nwekwara ike ime otu ihe ahụ maka ụlọ ahịa egwuregwu vidiyo, ụlọ ahịa teknụzụ ...
Ị na-anwa anwa ịkpata ego na Twitch?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Otu esi enweta ego na Twitch
Kedu ihe bụ Etsy
Kedu ihe bụ telephony IP na kedu ka ọ ga-esi nyere azụmahịa gị aka?